Masar oo kor u qaaday diyaar garowga dagaal ay la gasho Erduqaan - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Wasiirka difaaca Masar wuxuu hadda in bil ahba ku sugan yahay xadka lagu yaqaanay bilaa rabshada ee Liibiya iyo Masar oo hadda Masar filayso inuu noqdo kan ugu mashquulka badan. Dagaal u dhexeeya Masar iyo Liibiya ayaan laga maarmeyn.
Iyadoo ayna jirin in Erduqaan dib uga guranayo dagaalka Liibiya oo hadda uu rabo inuu dalkoo dhan ka saaro ciidanka qaranka ee Liibiya ee uu hogaamiyo Jeneraal Khaliifa, Masar waxa la gudboon inay difaacato danaheeda.
”Waxa dhawaan diyaaradaha Masar burburiyeen gantaalaha lidka diyaaradaha oo Turkiga u yaalay saldhiga Watiya ee galbeedka Liibiya, waxay kaloo khadka ka saartay qalabka khalkhalinta diyaaradaha aan is wadin iyo gantaalada ee halkaas yaalay.
Erduqaan ayaa kordhiyay maleeshiyada uga dagaalanta Liibiya iyo weliba ciidankiisa joogtada ee ku sugan galbeedka Liibiya, waxa si joogta u booqda ciidankaas wasiirada difaaca ee dalkaasi.
Masar ayaa kor u sii qaaday diyaarinta ciidankeeda xadka ayadoo khad cas ka dhigatey magaalooyinka Sirte iyo saldhiga milatari ee Jufra ee bariga dalkaasi.
Masar ayaa dhoolatusyo joogta ah ku soo bandhigtey hub casri ah iyo gantaalo noocyo badana oo inta badan aan dagaal lagu gelin.
Masar ayaa ku dhow inay gudaha u gasho Liibiya haddii Erduqaan qaado talaabo uu ku sii fidayo.
Haddii dagaal qarxo
Erduqaan ayaan wax taageero ah ka helayn Taram halka Masar ay si fudud taageero uga helayso Faransiiska, Ruushka, dhinaca lacagtana ayna jirin lacag la’aan maadaama ay wataan Sucuudiga iyo Imaaraadka.
”Ma dheera in Masar gasho Liibiya ayuu yiri Xuseen Warsame